Arsivan'ny fanatanjahantena - teles relay
Solskjaer dia nandà ny Greenwood nilatsaka ho fifehezana
2:06 PM ETRob DawsonCorrespondent Ole Gunnar Solskjaer dia nandà ny tovolahy Mason Greenwood nesorina tamin'ny ekipan'ny Manchester United noho ny antony fifehezana.
CHAN 2021: A. Hira, Zoua… hanamafisana an'i Kamerona? - Andao Hiresaka Football 237
Le mercato a fermé ses portes à peu près partout dans le monde sauf au Cameroun où les clubs ont jusqu’au 24 octobre prochain pour se renforcer et pourront même encore…
Bencharki nandresy an'i Zamalek tamin'ny lalao voalohany
Bencharki dia nandresy tamin'ny laharana voalohany ho an'i Zamalek Zamalek avy any Egypt dia nilaza fa nandresy tamin'ny lalao voalohany tamin'ny lalao manasa-dalana tamin'ny fiadiana ny ho tompondakan'i Afrika Tompondakan'i Afrika, nandresy an'i Raja Casablanca 1-0 tany Maraoka ny alahady alina teo.…
Harold Moukoudi: "Diso fanantenana tamin'ny valiny"
L’international camerounais Harold Moukoudi et AS Saint-Etienne ont connu une difficile entrée en matière ce dimanche alors qu’ils recevaient l’OGC Nice dans le cadre de la septième journée de Ligue 1. Une première manche totalement…
LIVE Transfer Talk: Man United dia manana an'i Valverde an'i Madrid ho hitan'izy ireo
Ny areti-mifindra coronavirus dia nahatonga ny tsenan'ny famindrana tsy ho toy ny teo alohany, saingy mbola betsaka ny hetsika tamin'ny Andron'ny fe-potoana. Rehefa mihidy ny varavarankely amin'ireo ligy lehibe any Eropa dia azonao atao ny manamarina ireo famindrana lehibe vita farany…
L1: ASSE mbola mandray rano, Nice dia atao - FOOT 01
Ao amin'ny Geoffroy-Guichard, Nice dia mandresy an'i Saint-Etienne 3-1 tanjona ho an'i Saint-Etienne: tanjona Aouchiche (faha-57) ho an'i Nice ... Ity lahatsoratra ity dia niseho voalohany tamin'ny ...
Allan Nyom manala baraka an'i Ansu Fati an'ny FC Barcelona noho ny antsitrika
Ansu Fati dia iray amin'ireo tanora mpilalao baolina kitra mampientanentana indrindra eto an-tany. Ilay mpilalao baolina, izay feno 18 taona tamin'ny 31 Oktobra, dia nahavita tanjona valo tamin'ny lalao telo amby telopolo lasa tamin'ny taon-dasa. Ny fampisehoana mahatalanjona nataony dia ...
Choupo-Moting: fahombiazana voalohany miaraka amin'i Bayern Munich
Sambany tamin'ny naha mpilalao Tompondakan'ny UEFA azy, naneho ny halehiben'ny talentany ny iraisam-pirenena Kameroney. Tsy vitan'ny hoe nandray anjara betsaka tamin'ny zava-bita telo an'ny ekipany izy, fa ny fandraisany anjara tamin'ny lalao ...
Amboara Alemanina: mitafy Bayern Munich i Choupo-Moting. - Andao Hiresaka Football 237
TELES RELAY Oct 15, 2020 0
Ho an'ny voalohany miaraka amin'ireo tompon-daka eropeana, i Choupo-Moting dia efa naneho hevitra sahady. Nandresy tamin'ny isa 3 noho 0 i Bayern nanoloana ny FC Düren noho ny fanaovan'izy ireo sonia vaovao. In ...
Aboubakar Vincent: sorona tsy misy fiarovana
Vao nifanaraka tamin'ny kliobany taloha avy any Portiogaly, FC Porto ny klioba iraisam-pirenena Kamerona mba hiditra ao amin'ny megalopolis of Istanbul any Torkia sy Besijtas. Mbola nanana fifanarahana herintaona nifanarahana tamin'ny ...